ပိန္နဲသီးရဲ့ အစေ့ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ - Real News
Home Knowledge ပိန္နဲသီးရဲ့ အစေ့ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ပိန္နဲသီးရဲ့ အစေ့ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ပိန္နဲသီးဆို အရမ်းကြိုက်သူတွေရှိလား။ အသီးတင်မကဘူး၊ အသီးခြောက်တွေကိုပါ နိုင်ငံခြားကကို တကူးတက မှာယူကြတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွေအိမ်မှာတော့ ပိန္နဲသီးခွဲပြီဆို စားပြီးတဲ့အစေ့တွေ အမေက အကုန်ပြန်သိမ်းတော့တာပဲ။
ပိန္နဲစေ့ကို ဆေးကြော၊ ပြန်ပြုတ်ပြီး ပုဇွန်ခြောက်ငံပြာရည်ချက်လေးနဲ့ စားရတာ ထမင်းမြိန်စေတဲ့ အတွဲအဖက်ပါ။ ပိန္နဲစေ့ပြုတ်ကို ဒီတိုင်းအခွံလေးခွာစားတာလည်း သရေစာတစ်မျိုးပဲ။
ငယ်ငယ်တည်းက လူကြီးတွေစားသလို လိုက်စားခဲ့တယ်၊ စားလို့ကောင်းလို့ ကြိုက်တယ် ဒီလောက်ပဲလေ။ ဒီလောက် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးရှိလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။ ပိန္နဲစေ့ကနေ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲ….
ပိန္နဲစေ့မှာ ဟေမိုဂလိုဘင်ရဲ့အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ သံဓာတ်ပါဝင်မှုများပါတယ်။ သံဓာတ်ပမာဏအလုံအလောက်ရရှိနိုင်ရင် သွေးအားနည်းရောဂါကိုကုသနိုင်ပြီး သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါဝေဒနာအတော်များများကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သံဓာတ်က သွေးနီဥဆဲလ်တွေ ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြင့်စေလို့ ကိုယ်ခံအားကိုတက်စေပါတယ်။
(၂) အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေတယ်
တိုင်းရင်းဆေးပညာတွေအရဆိုရင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ တခြားအစာခြေစနစ်ပြဿနာတွေကို ကုသဖို့ ပိန္နဲစေ့ကိုကြိတ်ထားတဲ့အမှုန့်ကို သုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိန္နဲစေ့ မှာ အစာခြေစနစ်ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတဲ့အခါလည်း သူ့ကို သုံးလို့ရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ပမာဏအများကြီးမဟုတ်ဘဲ တော်သင့်သလောက်စားတာက ဆေးဖက်ဝင်နိုင်ပါတယ်။
ပိန္နဲစေ့မှာ အမြင်အာရုံအတွက် အာဟာရဓာတ်ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင်အေ ပါဝင်ပါတယ်။ မျက်စိကိုအားကောင်းစေတဲ့ ပိန္နဲစေ့ က မျက်စိအတွင်းတိမ်နဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့်မျက်စိမှုန်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သုတေသနထပ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ပိန္နဲစေ့ မှာပါတဲ့ မဂ္ဂနိစ်က သွေးခဲပိတ်ဆို့ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၅) ကြွက်သားဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးတယ်
ပိန္နဲစေ့မှာပါတဲ့ ပရိုတင်းတွေက ကြွက်သားဖြစ်ပေါ်မှုမှာ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ အများကြီးမစားဖြစ်ဘူးဆိုပေမယ့် အနည်းအကျဉ်းတွဲစားတာလောက်နဲ့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ စားဖို့မဟုတ်ဘူး။ ပိန္နဲစေ့တွေကို နွားနို့၊ပျားရည်နဲ့စိမ်နှပ်ထားပေးပါ။ပြီးရင် အကုန်ရောကြိတ်ပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကို မျက်နှာ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင်ခြောက်တဲ့အထိထားပြီး ရေနွေးနွေးလေးနဲ့မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။ မျက်နှာလေးဖြူဝင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ဗီတာမင်အေကြောင့်ပါပဲ။ ဗီတာမင်အေက ဆံသားကြွပ်ဆတ်ပြီး ကျိုးပြတ်လွယ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပိန္နဲစေ့မှာကြွယ်ဝတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေကလည်း ဆံသားကျန်းမာရေးကို အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သံဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့်လည်းဦးရေပြားမှာ သွေးလည်ပတ်မှုပိုကောင်းစေပြီး ဆံပင်အတွက် အကျိုးပြုတာက နောက်တစ်ချက်ပါ။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ပိန္နဲစေ့က စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိနေတာပါ။
သူ့မှာပါတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့တခြားအာဟာရဓာတ်တွေရဲ့အာနိသင်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ပါးလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းခံတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့် ဒီနည်းနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသီးတွေချည်း ဝယ်စားမနေကြနဲ့ဦးနော်။ အစေ့တွေလွှင့်မပစ်ဘဲ စားကြည့်လိုက်ပါ။ အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ ဖြစ်နေတာမို့ ကြုံတဲ့အခါ စားကြည့်နော်။ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ – Yun Sandi Nan Mon / ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ – Dr. Thurein Hlaing Win / Source : Hello ဆရာဝန်
ပိန်နဲသီးရဲ့ အစကေို့ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ရရှိလာမညျ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြား
ပိန်နဲသီးဆို အရမျးကွိုကျသူတှရှေိလား။ အသီးတငျမကဘူး၊ အသီးခွောကျတှကေိုပါ နိုငျငံခွားကကို တကူးတက မှာယူကွတဲ့ သူတှရှေိပါတယျ။ ကိုယျတှအေိမျမှာတော့ ပိန်နဲသီးခှဲပွီဆို စားပွီးတဲ့အစတှေ့ေ အမကေ အကုနျပွနျသိမျးတော့တာပဲ။
ပိန်နဲစကေို့ ဆေးကွော၊ ပွနျပွုတျပွီး ပုဇှနျခွောကျငံပွာရညျခကျြလေးနဲ့ စားရတာ ထမငျးမွိနျစတေဲ့ အတှဲအဖကျပါ။ ပိန်နဲစပွေု့တျကို ဒီတိုငျးအခှံလေးခှာစားတာလညျး သရစောတဈမြိုးပဲ။
ငယျငယျတညျးက လူကွီးတှစေားသလို လိုကျစားခဲ့တယျ၊ စားလို့ကောငျးလို့ ကွိုကျတယျ ဒီလောကျပဲလေ။ ဒီလောကျ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးရှိလိမျ့မယျလို့ မထငျခဲ့မိပါဘူး။ ပိန်နဲစကေ့နေ ဘယျလို ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှရေနိုငျလဲ….
ပိန်နဲစမှေ့ာ ဟမေိုဂလိုဘငျရဲ့အဓိကပါဝငျပစ်စညျးဖွဈတဲ့ သံဓာတျပါဝငျမှုမြားပါတယျ။ သံဓာတျပမာဏအလုံအလောကျရရှိနိုငျရငျ သှေးအားနညျးရောဂါကိုကုသနိုငျပွီး သှေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါဝဒေနာအတျောမြားမြားကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ သံဓာတျက သှေးနီဥဆဲလျတှေ ထုတျလုပျမှုကိုတိုးမွငျ့စလေို့ ကိုယျခံအားကိုတကျစပေါတယျ။
(၂) အစာခွစေနဈကို ကနျြးမာစတေယျ
တိုငျးရငျးဆေးပညာတှအေရဆိုရငျ ဝမျးခြုပျခွငျးနဲ့ တခွားအစာခွစေနဈပွဿနာတှကေို ကုသဖို့ ပိန်နဲစကေို့ကွိတျထားတဲ့အမှုနျ့ကို သုံးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ ပိန်နဲစေ့ မှာ အစာခွစေနဈကနျြးမာရေးအတှကျ သိပျကိုအကြိုးပွုတဲ့ အမြှငျဓာတျကွှယျဝနတောဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောတဲ့အခါလညျး သူ့ကို သုံးလို့ရတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ပမာဏအမြားကွီးမဟုတျဘဲ တျောသငျ့သလောကျစားတာက ဆေးဖကျဝငျနိုငျပါတယျ။
ပိန်နဲစမှေ့ာ အမွငျအာရုံအတှကျ အာဟာရဓာတျဖွဈတဲ့ ဗီတာမငျအေ ပါဝငျပါတယျ။ မကျြစိကိုအားကောငျးစတေဲ့ ပိန်နဲစေ့ က မကျြစိအတှငျးတိမျနဲ့ အသကျအရှယျကွောငျ့မကျြစိမှုနျခွငျးတို့ကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
သုတသေနထပျလုပျဆောငျဖို့လိုသေးတယျဆိုပမေယျ့ ပိန်နဲစေ့ မှာပါတဲ့ မဂ်ဂနိဈက သှေးခဲပိတျဆို့ခွငျးကို ထိနျးညှိပေးနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။
(၅) ကွှကျသားဖွဈပျေါမှုကို အားပေးတယျ
ပိန်နဲစမှေ့ာပါတဲ့ ပရိုတငျးတှကေ ကွှကျသားဖွဈပျေါမှုမှာ အထောကျအကူပေးပါတယျ။ အမြားကွီးမစားဖွဈဘူးဆိုပမေယျ့ အနညျးအကဉျြးတှဲစားတာလောကျနဲ့ အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။
ဒီတဈခါတော့ စားဖို့မဟုတျဘူး။ ပိန်နဲစတှေ့ကေို နှားနို့၊ပြားရညျနဲ့စိမျနှပျထားပေးပါ။ပွီးရငျ အကုနျရောကွိတျပါ။ ရလာတဲ့အနှဈကို မကျြနျှာမှာ လိမျးပေးပါ။ ပွီးရငျခွောကျတဲ့အထိထားပွီး ရနှေေးနှေးလေးနဲ့မကျြနှာသဈလိုကျပါ။ မကျြနှာလေးဖွူဝငျးလာပါလိမျ့မယျ။
ဗီတာမငျအကွေောငျ့ပါပဲ။ ဗီတာမငျအကေ ဆံသားကွှပျဆတျပွီး ကြိုးပွတျလှယျခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ပိန်နဲစမှေ့ာကွှယျဝတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတှကေလညျး ဆံသားကနျြးမာရေးကို အားဖွညျ့ပေးနိုငျပါတယျ။
သံဓာတျပါဝငျမှုကွောငျ့လညျးဦးရပွေားမှာ သှေးလညျပတျမှုပိုကောငျးစပွေီး ဆံပငျအတှကျ အကြိုးပွုတာက နောကျတဈခကျြပါ။ ပိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာက ပိန်နဲစကေ့ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ပါးသကျသာစနေိုငျစှမျးရှိနတောပါ။
သူ့မှာပါတဲ့ ပရိုတငျးနဲ့တခွားအာဟာရဓာတျတှရေဲ့အာနိသငျဖွဈပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ ဆံပငျကြှတျခွငျး၊ ဆံပငျပါးလာခွငျးရဲ့အကွောငျးရငျးခံတဈခုဖွဈနတောကွောငျ့ ဒီနညျးနဲ့ ဆံပငျကြှတျသကျသာစတောပဲဖွဈပါတယျ။
အသီးတှခေညျြး ဝယျစားမနကွေနဲ့ဦးနျော။ အစတှေ့လှေငျ့မပဈဘဲ စားကွညျ့လိုကျပါ။ အစာလညျးဆေး၊ ဆေးလညျးအစာ ဖွဈနတောမို့ ကွုံတဲ့အခါ စားကွညျ့နျော။ ဒီအကြိုးကြေးဇူးတှရေနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ရေးသားသူ – Yun Sandi Nan Mon / ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ – Dr. Thurein Hlaing Win / Source : Hello ဆရာဝနျ
Previous articleပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားသော မြန်မာပြည်က လူတွေ မညီညွှတ်ရခြင်း အကြောင်း
Next articleပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ရင် လောဘကြီးတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်ဇနီးကို လေးစားဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ လင်းလင်း
ငလျှင်လှုပ်ခြင်းကြောင့် ရေများ ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ဟုဆို
တောမီးလောင်မှုကနေ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်း သေဆုံးသွားသော ပေ(၃၀)ကျော်စပါးအုံကြီး
ချစ်ဇနီးလေး ချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းကိုစားဖို့ ပြင်ဦးလွင်အထိ လိုက်သွားခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ရွှေထူး
ရက်စက်လိုက်ကြတာ အသက် ၇၀ အရွယ် အဖိုးတစ်ဦးကို မြေးဖြစ်သူက လာစွန့်ပစ်သွား
လူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အမေတို့မိသားစုထဲကိုပြန်လာပါဆိုတဲ့သရုပ်ဆောင် မင်းသွေးရဲ့ မိခင်
မြွေကိုက်ခံရသော အမျိုးသမီး မသေပဲ ကိုက်တဲ့မြွေ ဆီလီကွန်အဆိပ်မိသေဆုံး (ရုပ်သံ ကြည့်ရန်)
ကင်ဆာ အဆင့်(၄) ဆေးရုံက (၆)လပဲ နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ သူ ယခုအကုန်ပျောက်ပြီဟု မှတ်လိုက်ပါပြီ
လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုများ ဇွန်လအထိ ဖြစ်ပေါ်နေဦးမည်ဖြစ်ပြီး၂ဝ၂ဝ နွေရာသီတွင် လျှပ်စစ်မီးမပြတ်တောက်စေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲထား
ရွှေသားစစ်စစ် ၁ပိဿာ၂၀သားရှိတဲ့ ရွှေအင်္ကျီဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ မုံရွာမြို့ကအလှူဒါယကာမ
သင်္ဃန်းကျွန်း(စံပြ)ဆေးရုံ၌ မီးဖွားပြီးစ အမျိုးသမီးသုံးလွှာပေါ်မှ ခုန်ချသေဆုံး
နာမည်ကျော် အိုင်ဒေါ ဂျပန်ကတုံးမင်းသားကြီးနှင့် ဂျပန်အပြာလောက အကြောင်း တစေ့တစောင်း
အရေးပေါခွဲစိတ်ဖို့ အလှူငွေလိုနေတဲ့ သားလေး